Hooyo Soomaaliyeed oo ku nool Sweden oo Caruurteeda laga qaatay - Hablaha Media Network
Hooyo Soomaaliyeed oo ku nool Sweden oo Caruurteeda laga qaatay
HMN:- Hooyo Soomaaliyeed oo ku nool dalka Sweden gaar ahaan magaalo madaxda dalkaas ee Stockholm, ayaa lagu soo waramayaa in laga qaatay 5 caruur ah oo ay dhashay.
Hooyadaan oo lagu magacaabo Qadro Cilmi, ayaa laga qaatay 5 caruur ah oo ay dhashay oo midka ugu yar uu 2 sano jir yahay.
“Markii hore Hooyada waxaa laga qaatay wiil oo laga watay iskuulkii uu wax ka baranayay, maalintii xigtayna waxaa la dhahay keen 4 kale, waxaana sidaas dhahay kooxda arrimaha bulshada ka shaqeeya” sidaas waxaa tiri Hooyo la socotay sheekadaan taasoo diiday in magaceeda lasoo xigto.
Sida wararku ay sheegayaan, markii ay Hooyada iyo aabaha dhalay caruurta tageen xafiiska kooxda arrimaha Bulshada, ayaa waxaa laga codsaday in caruurta ay galiyaan xafiis gaar ah, sidaasna looga reebtay.
Hooyadaan oo la sheegay ineey 3 sano joogtay Sweden, ayaa lagu eedeeynayaa in caruurta aysan si fiican ula macaamilin islamarkaasna siinin waxeey u baahanyihiin.